Dzazvino US, UK, mazano eEU kuumambo hweEswatini inotsigirwa neAfrican Tourism Board
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Breaking Eswatini News » Dzazvino US, UK, mazano eEU kuumambo hweEswatini inotsigirwa neAfrican Tourism Board
African Tourism Bhodhi • Breaking Eswatini News • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Kodzero Dzevanhu • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Mashoko asiri iwo pamasocial media anopomerwa mhirizhonga muKingdom Eswatini sekutaura kweHurumende. Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinofunga kuti mamiriro ezvinhu akaomeswa nevapanduki vekune dzimwe nyika nekuda kwekuti Eswatini iri kuziva Republic of China inozivikanwa seTaiwan pamusoro pePeoples Republic of China neGuta reBeijing.
Kuratidzira uye kupamba zvakapambwa muAfrican Kingdom yeEswatini.
Vanhu vemuEswatini vanga vachikumbira democracy. Uku kuyedza kwekutanga kwerunyararo kwakaparadzwa nematsotsi vakatora mukana weyakaomesesa kupamba, kupamba, nekuuraya. Izvi zvakapindurwa kune mamwe mhirizhonga.
Sekureva kwenzvimbo yehurumende, pfungwa yekudzikama yakadzoka uye HM King Mswati vakadaidzira Sibaya.
The African Tourism Bhodhi is mahofisi makuru muEswatini uye vakadzokorora chirevo chakabatana chakaburitswa neUnited States, European Union, neUnited Kingdom vachikurudzira kudzikama uye nhaurirano inovaka pakati pemapato ese.
Iri pakati peSouth Africa neMozambique, nyika yakatambura izvo Amnesty International akatsanangura se "kurwisa kwakazara pamusoro pekodzero dzevanhu" apo humambo huchiedza kwazvo kubatirira pasimba.
Tourism uye zviitiko zvetsika ndizvo mari hombe inotambira ino yakasarudzika yekuAfrica.
Semumwe wevashoma vasara mamamongi muAfrica, tsika nemagariro zvakadzika zvakadzama muzvinhu zvese zvehupenyu hweSwazi, zvichisimbisa chiitiko chisingakanganwike kune vese vanoshanya. Iyi ndiyo slogan iri pa Eswatini Tourism Promotion Webhusaiti.
HM King Mswati Kushevedzera kwaMambo kuna Sibaya kweChishanu kwakasangana nemhinduro dzakasiyana kubva kunhengo dzeveruzhinji.
Maererano Nguva dzeSwaziland, vamwe vakati vaifara kuti Mambo vanogona kuzopedzisira vataura nenyika zvichitevera kuratidzira kwevanotsigira demokrasi kwakazoguma nemhirizhonga, kupamba, nekuparadza midziyo. Vamwewo vakati vaitenda kuti yakanga yakurumidza kutaura nezvenyika, kunyanya nekuda kweCOVID-19 denda rechitatu.
Mambo vakadaidzira Sibaya kuburikidza naIndvuna Themba Ginindza mumusangano nevatori venhau wakaitirwa kuLudzidzini Royal Residence nezuro. Mambo vakati emaSwati ese anofanirwa kunge agara mukati memombe byre na10 am. Mambo vanoti zviitiko zveSibaya zvichange zvichitepfenyurwa zviripo kuitira kuti avo vasingakwanise kuenda kunzvimbo iyi vatevere kubva kunyaradzo yemisha yavo kuburikidza nenzira dzese dzenhau. Monarch yakasimbisa kuti avo vachange vachitevera zvaiitika kuburikidza nenhepfenyuro nhepfenyuro vanofanirwa kunyatsoteerera kune zvichataurwa.